Marka haweeneydu kuu sheegto waxyaalaheeda - Talo ku saabsan Ragga Caadiga ah | Ragga Caqliga leh
Marka haweeneydu kaaga sheekaysato waxyaalaheeda, waa sababta oo ah kalsoonida iyo saaxiibtinimadeedu ma xaddidna, ee waa ujeeddooyinkeeda ku aaddan nin waa calaamado cad ujeedka iyo feejignaanta. Waa calaamad cad oo uu ku raaxaysto shirkaddaada iyo wuxuu leeyahay kalsooni weyn. Waxaa laga yaabaa inay tahay soo jiidasho shucuureed ama in ujeeddooyinkaagu abuuraan calaamad cad oo jaceyl.
Haddii aad rabto inaad ogaato wax badan oo ku saabsan haweeneyda kuu sheegta waxyaabahaaga, waa inaad ku ogaataa astaamaha muuqda ee ay rabto inay ku tusto. Dunida yaabka leh ee soo jiidashada ayaa timid weydiiso sheekooyin badan iyo in ay tahay in aad uur ku yeelato macluumaadka qaar intarneedka. Sida loo ogaado haddii haweeneydu ku jeceshahay iyo in kale ama waxa ay damacsan tahay, waa inaad ku ogaataa foomamka iyo awoodaha soo socda in ay ku tusaan tusaalooyinka soo socda.
1 Marka haweenaydu kula hadasho oo ay wax kuu sheegto
2 Habka uu u hadlo waa mid kufilan oo dareenka ayaa la dareemi karaa
3 Marka haweeneydu wax kuu sheegto oo ay ku sameyso qoraal
Marka haweenaydu kula hadasho oo ay wax kuu sheegto
Waxaa jira dhowr siyaabood oo lagu aasaaso wada sheekeysi, haweeney Waxaad ku samayn kartaa shaqsi ahaan ama shabakadaha bulshada. Si aad u falanqeyso sida haweeneydu kula hadasho, ha lumin faahfaahinta nooca calaamadaha ay kuu soo diri karto jidka si aad u bilowdo wadahadal ama habka uu u hadlo.
Haweenka xiisaynaya waxay bixiyaan kaftan iyo farxad marka ay jaceyl yihiin. Marka haweeneydu ku raaxaysato hadalka oo ay dareento raaxo leh shirkaddaada, habka ay u hadasho ayaa ah mid dareen badan, qosol joogto ah oo ay soo baxdo. Ma noqon doonto mid aan raaxo lahayn, kaliya waa sababta oo ah waxay dareemeysaa wax weyn. Waxaad ogaan doontaa inuu jecel yahay hadalka iyo luuqad fur, lugahooda iyo gacmahooda waa la fidin doonaa waana calaamad aad u cad oo ah inay ku danaynayaan.
Waxaa jira faahfaahin badan oo togan wada sheekeysi lala yeesho haweeney. Waxay si joogto ah kuu fiirin doontaa oo aan joogsanayn, ma caawin karto haddii ay dareento qushuuc. Xiisihiisu aad buu u weyn yahay oo ma aha oo kaliya inuu kuu sheego waxyaalihiisa, laakiin wuxuu ku weydiin doonaa su’aalo badan isagoon joojin. Sidan, kaliya ma tusi doontid soojiidashadaada oo dhan, laakiin su'aalahaaga ayaad ku weydiin doontaa baaritaan nafsi ah oo ku saabsan shakhsiyaddaada. Wuxuu u baahan yahay inuu ogaado macluumaadka ugu badan ee suurtogalka ah ee adiga kugu saabsan.
Habka uu u hadlo waa mid kufilan oo dareenka ayaa la dareemi karaa
Sii wad khadka sii wadida weydiinta, wada hadalku waa mid dheecaan leh oo raaxo leh dareensii inuusan kaa caajisayn. Aad buu u xiiseynayaa wadahadalkaaga, taa lidkeeda, haddii uusan hadlin wax badan oo wax walba dhacaan waxay noqon doontaa calaamad xun. U fiirso dareenkiisa, haddii uu cagaha ku ciyaaro oo uu naftiisa wax badan taabto, waxay noqon doontaa astaan ​​cad oo taas ah way xasilloon tahay waayo wuu ku jecel yahay
Marka haweeneydu wax kuu sheegto oo ay ku sameyso qoraal
Jidka fariimaha warbaahinta bulshada Waxay soo gashay adduunkeena dhowr iyo toban sano hadda. Duruufo kala duwan awgood, waxaa jira dad aan aad ugu dhaweyn wada joogista iyo kuwo kale oo leh dariiqa qiiro weyn awgeed, oo adeegsada. Dumarku waxay ku kalsoon yihiin inay wax ku qoraan shabakadaha bulshada waana inaad taqaanaa sida loo falanqeeyo goorta iyo sida ay wax kuugu sheegaan iyo Sidee bay u sameeyaan.
Waxaa jira tafaasiil badan oo dhacda marka haweeney kuu soo qorto. Haddii aad si joogto ah u samayso oo ay sii jirto muddo dheer, waxay ku siinaysaa calaamado aad u wanaagsan oo ah rabitaan kula sheekayso oo ka ag dhow. Waa inaad lafagurtaa haddii cidhifyadu yihiin jaceyl oo ma aha qof ku mashquulsan xiriirka suurtogalka ah iyada oo aan ka badan.
Haweeney rabta inay kula hadasho oo danaynaysa ayaa kuu soo qori doona farriimo dhaadheer oo faahfaahsan, xitaa iyada oo lagu sifeeyay si gaar ah waxa uu sameeyay maalintii oo dhan. Faahfaahin kale ayaa ah marka, marka laga reebo dhammaystirka faahfaahinta, uu wali sii wado raadinta kuwa kale wax walba ka hadal. Haweeneyda aan rabin inay hadasho xitaa ma muujin doonto faahfaahin waxaana la ogaan doonaa inay xitaa dareemaan inay ku qasban yihiin inay ka jawaabaan.
Haweenaydaasi waxay ku dhiirataa inay qorto qoraalka oo xitaa si joogto ah ayay u samaysaa ama qor qoraalo isku xiga ilaa laba jeer. Waxaa laga yaabaa inay muhiim tahay inay aad u kacsan tahay ama aysan ku dhibayn sababtoo ah sidoo kale aad ayaad u danaynaysaa.
Marka haweeneydaasi ay wax kuu soo qorto iyo si qurux badan buu u sameeyaa, halkaas wuxuu ku leeyahay wax badan oo uu muujiyo oo uu dareemayo. Wuxuu u tagaa dhibka ah inuu jumladaha ka dhigo kuwo asal ah. Waxaa ku jira xarfo waaweyn ama calaamado aad u faahfaahsan mararka qaarkoodna xitaa wuxuu tagaa dhibka u doqon sida gabadh waayo kalsooni ayay ku qabtaa. Haddii ay aad u danaynayso, waxay xitaa doonaysaa inay kula wadaagto heesaha, daqiiqadaha, buugga, weedhaha qoran ... taas oo wax badan kaaga sheegi doonta shakhsiyaddeeda.
ogeysiis haddii aad isticmaasho emoticons badan, maxaa yeelay waa astaan ​​cad oo ah inuu doonayo inaad si dhab ah u ogaato sida uu dareemayo. Dadka isticmaala emoticons aad u badan waxay rabaan inay muujiyaan waxayna u tagaan dhibka ah inay ka dhigaan wadahadal qoraal ah mid lagu raaxaysto.
Ha ka shakinin in sida uu rabo inuu kula hadlo, ha ahaato qoraal ama shaqsi ahaan, mar walba la qiimeyn doono. habkii uu u malayn jiray, ee uu nafsad -darrada ahaa iyo inta jeer ee aad rabto inaad samayso. Haddii arrimahan oo dhami isu yimaadaan, xitaa qaar kale oo dheeraad ah oo aan faahfaahinnay, hubaal waa sababta aad rabto inaad hesho dareenkaaga, wax badan ka ogaato oo aan kaaga sheekeeyo noloshiisa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Lamaanaha iyo Galmada » Marka haweeneydu kuu sheegto waxyaalaheeda
Waxa la siinayo haweeney